ပင်မစာမျက်နှာ / နေထိုင်မှုဆိုင်ရာစိတ်ကူးများ /
နေအိမ်အပေါ်ထပ်ရေယိုစိမ့်ခြင်းဟာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ အမိုးပြားအလွှာတွေဟာ နေဒဏ်မိုးဒဏ် အစရှိတဲ့ရာသီဥတုဒဏ်တွေကြောင့် အက်ကွဲခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ဆောက်လုပ်နေစဉ်အတွင်း ကွန်ကရစ် မျက်နှာပြင်ကိုကာကွယ်ပေးသောစတီးချောင်းများအသုံးပြုမှုနည်းခြင်းကရေစိုခံနိုင်တဲ့ဆက်ကြောင်းနေရာများရှိအက်ကွဲကြောင်းများကို အခြေအနေပိုမိုဆိုးရွားစေပါတယ်။ ဒီလိုပြဿနာအတွက်ဖြေရှင်းနည်းကတော့
• အမိုး အောက်ခြေရှိအက်ကွဲကြောင်းများကို ရှုံ့တွခြင်းမရှိတဲ့နှာကြောင်းဖြည့်ကော်နဲ့ဖြည့် ပါ။
• ရေစီးဆင်းမှုကောင်းစေရန် အမိုးလျှောေ စာက်ကိုသံလျက် (သို့) ဂေါ်ပြားငယ်ဖြင့်ညှိယူပါ။
• ဒီပြဿနာတွေကို လစ်လျူရှုမယ်ဆိုရင်တော့ မိုးဒဏ်ကြောင့် စတီးဖရိန်တွေဟာသံချေး တက် ပြီးကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်ကို အက်ကွဲကြောင်းဖြစ် ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
• အမိုးဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မှုပုံစံကို ထိခိုက်စေရုံသာမက နေထိုင်သူများရဲ့လုံခြုံရေးကိုပါထိခိုက်ေ စနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမိုးပျက်စီးမှုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပြီး ပျက်စီးမှုများကို လည်းသင့်လျှော်တဲ့ပြုပြင်မှုတွေကိုချက်ချင်းပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
SCG ပို့လန်ဘိလပ်မြေ TYPE I (in PP Woven 50 kg.)
SCG WHITE CEMENT ( in PP Woven 40Kg.)
SCG အုတ်စီအချောကိုင်ဘိလပ်မြေ (in PP Woven 50 kg)
SCG ကြွေပြားကပ်ကော်ဘိလပ်မြေနှင့် ကြွေပြားနှာကြောင်းဖြည့်ဘိလပ်မြေ
SCG Build With Pride; Passion For Better Living 2018